ယိုစိမ့်မှုများက Asus သည် tripen camera နှင့် 10 "Chrome OS tablet နှင့် Zenfone ကိုပြင်ဆင်သည်။ Androidsis
အာရုန်သည် Rivas | | မိုဘိုင်း, NOTICIAS, Android တက်ဘလက်များ
အမျိုးမျိုးသောထင်မြင်ချက်များအရတရုတ်ကုမ္မဏီ Asus သည်၎င်း၏ catalog တွင်ကင်မရာသုံးလုံးပါရှိသောဖုန်းကိုနောက်ကျောဘောင်တွင်တပ်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။ အသစ် Huawei Mate 20။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အသစ်တစ်ခုကိုအမှတ်တံဆိပ်တက်ဘလက်၏ပြင်ဆင်မှုအတည်ပြုခဲ့သည်.
ယိုစိမ့်မှုသည် Roland Quandt မှဖြစ်သည်။ ၎င်းကပြောကြားခဲ့သည်မှာ ASUS သည် ZB634KL မော်ဒယ်နံပါတ်ပါသော Zenfone ဖုန်းအသစ်ကိုမကြာမီတွင်ပြသမည်ဖြစ်ပြီးအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောကင်မရာတပ်ဆင်မှုရှိသည်။
ရုရှားနည်းပညာဘလော့ မိုဘိုင်းဖုန်းဟုပြောသည် ဖုန်းကကျိန်းသေအတွက်ဆက်ခံသည် Zenfone Max Pro (M1), Max Pro (ZB601KL) ၏တူညီသောဖြစ်သော model number (ZB) ၏ပထမအက္ခရာနှစ်လုံးအပေါ်အခြေခံသည်။ မော်ဒယ်နံပါတ်ရှိ "63" ကိန်းဂဏန်းကိုဆိုလိုသည် ၆.၃ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိသည်"K" နှင့် "L" အက္ခရာစဉ်များသည် Snapdragon ပရိုဆက်ဆာနှင့် 4G LTE အထောက်အပံ့ကိုညွှန်ပြနေစဉ်။ ASUS ZB634KL သည် Zenfone Max Pro (M2) ကဲ့သို့စတင်သင့်သည်။
ASUS ZenFone ZB634KL သည် "SOON" ကိုစတင်သင့်သည်။ နောက်ဘက်တွင်သုံးဆ Cam တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အတူပါရှိသည်။
- Roland Quandt (@rquandt) နိုဝင်ဘာလ 12, 2018
ဒါပေမယ့်ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာတစ်ခုတည်းသော Max ဖုန်းမဟုတ်ပါ။ ASUS ZB632KL လည်းရှိပြီး၊ သုံးဆကင်မရာကို setup ကိုအဖြစ် ZB631KL နှင့် ZB633KL ။ ZB633KL သည် Zenfone Max (M2) ဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်သည်။
ASUS ZB634KL သည် Zenfone Max Pro (M1) ၏ဆက်ခံသူဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ ဖုန်းတွေအပြင် ASUS သည် Chrome OS တက်ဘလက်တစ်ခုတွင်လည်းအလုပ်လုပ်သည် ငါတို့သည်လည်းအံ့ are ခြင်းမရှိ။ ၏ပစ်လွှတ်ပြီးနောက် Google Pixel Slateအခြားထုတ်လုပ်သူများက bandwagon ကိုမခုန်မီ၎င်းသည်အချိန်ကာလတစ်ခုသာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ထို့အပြင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း Android တက်ဘလက်ရောင်းအားကျဆင်းလာခြင်းနှင့်အတူ Chrome OS သည်လမ်းပေါ်ထွက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ASUS Chrome OS တက်ဘလက်သည် ၁၀ လက်မမျက်နှာပြင်ရှိပြီးဇန်နဝါရီလတွင် CES 10 တွင်ပြသလိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးတစ်ခုမှာ ZB631KL & ZB633KL၊ Zenfone Max Pro (M2) နှင့် Zenfone Max (M2) တို့နှင့်အတူ "SOON" ကိုဖွင့်သင့်သည်။
- ЛазаревОлег (@LaOlTomsk) နိုဝင်ဘာလ 12, 2018
Chrome OS ကို ထုတ်လုပ်သူနှင့်အသုံးပြုသူနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်အကျိုးရှိသည့်စွမ်းဆောင်ချက်များစွာပေးထားသည်။ ပထမ ဦး စွာ operating system ကိုအားလုံး devices များပေါ်တွင်တူညီသည်မသက်ဆိုင်ထုတ်လုပ်သူ၏။ Android ဖုန်းတွေမှာမင်းလိုမျိုးထုံးစံအတိုင်းအရေခွံတွေမရှိဘူး၊ ဒါကြောင့် user interface ကတသမတ်တည်းရှိတယ်။
ASUS ကကျွန်တော်ထင်သည့်အတိုင်း၎င်း၏ပထမဆုံး Chrome OS တက်ဘလက် ~ ၁၀ လက်မမျက်နှာပြင်ကိုဖွင့်သောအခါအံ့အားသင့်စရာမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုနိုင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် #CES2019.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, နောက်ဆုံးသတင်းများကို Google မှကိုင်တွယ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင် device အားလုံးသို့ပေးပို့သည်။ Chrome OS ပလက်ဖောင်းပေါ်လာသည့် အချိန်မှစ၍ Chrome OS စက်ပစ္စည်းများသည်အနည်းဆုံး ၆ နှစ်ကြာမှမွမ်းမံမှုများရရှိမည်ဟု Google ကပြောကြားခဲ့သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » ယိုစိမ့်မှုများက Asus သည် tripen camera နှင့် 10″ Chrome OS tablet နှင့် Zenfone ကိုပြင်ဆင်သည်